Ady & Fifandirana · Febroary, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Febroary, 2010
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Febroary, 2010
Rosia: Tetikady miaramila vaovao sy ny fiarovam-baovao
Rosia 24 Febroary 2010
Namoaka ny tetikady (doctrine) miaramila vaovao[RUS] (hitanao ato ny dika amin'ny teny anglisy) hampiharina mandritra ny folo taona indray i Rosia tamin'ity volana febroary ity. Na dia tsy misy filazana mivantana ny resaka fiarovana an-tserasera na resaka aterineto mivantana aza io dosie io, dia miresaka momba ny endrika fifampitam-baovao ao anaty...
My name is Khan – Politikan-kolontsaina any India
India 17 Febroary 2010
Sarin'afisy hita ao amin'ny Wikipedia Tsy miresaka momba ilay sarimihetsika avoakan'i Bollywood hoe ‘My Name is Khan‘ [Khan no anarako], fa miresaka ny fahazoana azy kosa any India sy any Etazonia sy ny anton'izany. Ny topimaso ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny bolongana miteny Hindi no ahitana fa misy zavamisy...
Herisetra ataon'ny polisy any Timor nalaina an-tsary mihetsika
Timor Atsinanana 01 Febroary 2010
Tsy zava-baovao ny herisetra ataon'ny polisy any Timor-Atsinanana , kanefa vaovao ny nangalana izany an-tsary mihetsika. Zavatra niseho tamin'ny raharaha “Rodney King” tany Timor-Atsinanana sy ny polisiny izy ity. Polisy any Timor (PNTL) nalaina an-tsary eo am-panaovana herisetra. (Avy amin'ny fahatsaram-pon'i A.Tilman) Polisy any Timor (PNTL) nalaina an-tsary eo am-panaovana herisetra. (Nahazoana alalana tamin'i...